Tag: marketingprofs | Martech Zone
Adoption Marketing, taktika ary valiny amin'ny marketing amin'ny 2014
Alarobia 13, 2014 Talata, Aogositra 12, 2014 Douglas Karr
Navoakanay ny State of Content Marketing avy any Eloqua, ny Fanjakana Marketing 2014 ankehitriny, ary ny fironana momba ny marketing amin'ny atiny… manomboka mahita lohahevitra amin'ity taona ity ve ianao? Ity infographic avy any Uberflip ity dia maneho ny toetran'ny marketing amin'ny atiny ankehitriny eo amin'ireo orinasa B2014B sy B2C. Inona ny tetika tian'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao? Hitan'izy ireo ve ny valiny antenainy? Hanao ahoana ny ho avy? Zahao hahitanao azy! Ity infographic ity dia mila kely
Raha mbola tsy nanamarina ny sasany amin'ireo tombontsoa mahavariana sy fampianarana azo alaina amin'ny alàlan'ny MarketingProfs ianao dia tena tokony. Nandritra ny 10 taona mahery, MarketingProfs dia nampiseho amin'ny matihanina izay tena mandeha - ary izay tsy mandeha - eo amin'ny tsena ankehitriny. Ny fidirana ho mpikambana fototra dia ny fahazoana miditra amin'ny tranomboky feno lahatsoratra sy gazety. Ny PRO Membership dia manampy seminera manao ahoana, fohy Take 10 webcasts, fanentanana fanadihadiana tranga, SmartTools mora ampiasaina, ary maro hafa. Midira androany ary fantaro ny antony mihoatra ny